Indlela yokugcina i-summer tan ixesha elide?
Siyazi ukuba ixesha le-beach, yeyona, ihlobo. Eli lixesha lonyaka, apho siyakwazi ukuzincwina imihla ngemihla phantsi kwelanga elifudumeleyo kwaye sihombise isikhumba sethu ngegolide ecocekileyo okanye i-bronze tan. Ngoku siza kufunda indlela yokuqinisekisa ukuba i-tan yethu ayihlanjulwanga ngeentsuku zasehlobo.
Iyintoni imvelaphi ye-tan? WeNgingqi okanye wezantsi?
Emzimbeni ngamnye, ukucwiliswa kugcinwa ngeendlela ezahlukeneyo. Kuxhomekeke kwimpawu zomzimba wakho. Kwaye, ukuba kunjalo, ukusuka kwindawo oyibeka ngayo ilanga.Ukuba unotshanga elangeni kwiindawo eziselunxwemeni ezishushu ezantsi, ke ulungele ukuba i-tan ijule ngokukhawuleza kwaye ayiyi kuzaliseka njengeyokuqala. , umzekelo kwi-dacha okanye usebenza kwintsimi, kwaye kutheni ungenjalo. ... Ngoko ke ukuba unobumba kwiindawo zakho eziqhelekileyo, uya kuvuya ukuva ukuba loo tan iya kuhlala ixesha elide. Kulula kakhulu. Ilanga elwandle eluswini lwethu aluqhelekanga kwaye ngoko litshisa, kwaye xa ubuyela ekhaya, liqala ukuhlaziya, iiseli zihlaziye kwaye zihlanjululwe ngotshiso. Kungenxa yoko oku kuhlamba i-tan.
Xa ufika elunxwemeni, qiniseka ukuba uthathe i-zonzontik kwaye ususe ilanga kuphela emthunzini. Oku kuya kuba luncedo kakhulu, umthunzi omnyama uya kuhlala kwesikhumba sakho ixesha elide. Ngomthunzi, ukushona kwelanga kukukhuselekileyo. Kodwa ukutshisa ilanga ngakumbi, umthunzi uya kufuna ukuhlala ixesha elide. Nangona ukukhetha kuwe: isikhumba esinyanisiweyo sitshiswa somile.
Indlela yokunyamekela okozhe?
Kubalulekile ukusebenzisa izimonyo ezikhethekileyo ngaphambi kokuba uhambe olwandle kwaye ufike ekhaya. Emva kokuba ulusu lube ngumbala we-chocolate wexesha elide ulindele, umntu makanyamekele. Isikhumba esichitha ixesha elide elangeni, ukulahlekelwa kwamanzi, kungoko kuqala kukho konke okufunekayo ukuzalisa ukulinganisela kwamanzi. Ngoku kufuneka idakalise ngaphezu kwexesha elide, yingakho yonke imihla emva kokuhlamba okanye ukuhlamba kufuneka unondle umzimba ngokunyamezela kunye nezondlo: i-lotion, ukhilimu, ubisi. Ukuba umququzeleli uqulethe i-antioxidants, oku kuya kuphucula kakhulu imeko. Ukuba usele ilanga, ubudala besikhumba, kunye ne-antioxidants inokuthintela oku. Oku kufuneka kwenziwe ngeenyanga ezimbini, ngexesha apho isikhumba sinokubuyisela ngokupheleleyo.
Iindlela emva kokushisa kwelanga
Ukuze unyuse isikhumba, ungalibali ukusebenzisa izimonyo emva kokushona kwelanga. Akugcini nje ukunyusa isikhumba, kodwa kunceda ukuncibilikisa ukuhlala emzimbeni wakho. Iziqholo ezinjalo zimele zisetyenziswe ngokukhawuleza emva kokuba ziselilanga. Kodwa emva kokuphela kwexesha lokuloba elwandle, musa ukubeka ezi zikilo ebhokisini elimnyama. Ziyiluncedo kakhulu xa zisetyenziselwa ukudibanisa ne-moisturizer elula. Oku kuya kwandisa ixesha lokuzonwabisa kwelanga.
Ngokwemvelo, uvile ngeenkqubo ezinokuguqula isikhumba sakho umbala wendalo wangaphambili. Ukuthintela oku, uyeke ukugqoka iimaski ezigcotyiweyo. Unokuphelisa i-gel ye-tanning, i-liquids ukuze ususe i-makeup, i-toniki kunye nezinye izimonyo. Ukuba uyaluxabisa i-tan yakho, ngoko phambi kokuthenga okanye ukusebenzisa le sixhobo, funda oko kubhaliweyo kwilebula. Sebenzisa kuphela izimonyo ezibonisiweyo. Ukuba ufuna ukutyelela i-SPA-salon, ngoko ngaphambi kokuba uqale iinkqubo, qhagamshelana nengcali ukuba le nto iya kuthwala njani i-tan yakho.
Utshaba oluphambili lokutshisa ilanga iibhati kunye ne-saunas. Ukuba ufuna ukuhlala ujabulela umthunzi omhle wesikhumba sakho, ngoko uya apho uvaliwe. Ngenxa yokuba ulusu lukhuni kakhulu, izibonda zivuliwe kwaye zicoceke ngokucokisekileyo. Ukuba ucinga ukuba ukususela kwangekho nto iya kwenzeka, ngoko uphosakele, isikhumba sakho ngamanye amaxesha sibonakala sibala.
Ukuchithwa kwelanga akufanele kugcinwe kuphela ngaphandle, kubalulekile ukuzinceda ngaphakathi. Thatha iivithamini A, kunye nokulungelelanisa amavithamini amalungiselelo aqulethe nje kuphela le vithamini, kodwa kunye neyinkimbinkimbi yezinye i-microelements kunye nezinto ezinempembelelo entle, kwiikhonkwane zeenwele. Kodwa ngaphambi kokuba uthenge iilisi, xela ugqirha-ugqirha wakho. Ukuba ubuhle budinga imihlatshelo, awukwazi ukuwahohla impilo.
Kule solarium ngoncedo
I-solari ikulungele ukuba ulondoloze ixesha lokutyha ilanga lehlobo. Awudingi ukutyelela ilanga lokufakelwa rhoqo. Unako ukutshisa ilanga kanye ngeveki okanye kanye kanye emva kweveki ezimbini. Kuya kuxhomekeka kwiphi imthunzi ofuna ukuyixhasa.
Iikhabhinethi engenzileyo: inzuzo
Indlela yokulahla i-acne kunye ne-acne
Ndingathini ukuba ube lixhoba lelanga elivuthayo?
Indlela yokurhoxisa ubunzima be "izandla ezinomsolo"?
Isaladi kunye ne-shrimps kunye ne-croutons
Isidlo kunye neelayi neha
Ukubonisana nge-intanethi yeengqondo zeentsapho
Ukuzivocavoca ukulahleka kwesisindo kwindawo yokunyuka
Iindlela zokunyamekela umzimba